Portal:Dhul/Qof xul ah - Wikipedia
Portal:Dhul/Qof xul ah/1 Axmad bin Ibrahim al-Ghazi (, ) sidoo kale lagu naanaysi jiray Axmed Guray, Abaanduulihii Weynaa (dhashay 1506, dhintay February 21, 1543) wuxuu ahaa imaam, hogaamiye, abaanduule, sheekh iyo suldaankii boqortooyadii Adal taasi oo ku duushay dowladii awooda badneyd ee ka talin-jirtey Abyssinia isla markaana jebisay hogaankaasi kana qabsatey dhul badan. Imaam Axmed Guray magaciisa oo saxani waa Axmad ibn Ibrahim Al-Ghazi (), waxa lagu qiyaasaa in uu dhashay sanadkii 1507 - February 21, 1543. Wuxuu Ka Dhashay Qowmiyada Somaalida Wuxuuna kasoo jedaa beel weynta Isaaq Habar-Awal Sacad Muse wuxuu ka siiyahay Makaahiil sida taariikhdu cadaynayso wuxuuna naanees ahaan u watay Axmad Gareen al-ghazi balse soomaalidu waxey u yaqaanaan axmed gurey. Waxa uu ahaa Imaam Axmed Gurey Ragii ducaada ahaa ee aadka ugasoo horjeeday in jihaadka laga joojiyo gaalada itoobiya ,waxa aay muslimiinta ugaysanayeen awgeed,taasoo keentay in musliimiinta laga qaadijiray markaas lacag baad ah (Jizya). Dagaalo badan kadib waxaa dhacday in Imaam Axmed guray lawareegay Harar, dabadeedna wuxuu bilaabay weeraro jihaad ah oo isdaba jooga. Waxa uu galay dagaalo ba,an mudona socday, mahadhana reebtay, ilaa hadana laxasuusto.
Portal:Dhul/Qof xul ah/2
Portal:Dhul/Qof xul ah/3 Raage Ugaas Warfaa markii dambe noqdey Ugaas Raage Ugaas Warfaa wuxuu ahaa ugaas, hogaamiye, gabayaa, halabuur, dagaalyahan Soomaaliyeed kaasi oo noolaa wakhti lagu qiyaaso badhtamihii qarnigii 19aad. Raage Ugaas wuxuu ku dhashay ceelka Sasabane, meel u dhow magaalada Dhagaxbuur, Gobolka Soomaali Galbeed ee wadanka Itoobiya. Raage waxaa dhalay Ugaas Warfaa Faaraxa Samatar oo ahaa Ugaaska Beelaha Gadabuursiga, waxaa la dhashay labo wiil oo ka weynaa kuwaasi oo kala ahaa Ugaas Xuseen iyo Xilkab. Si kastaba ha ahaatee, Ugaas Raage wuxuu yaraantiisii ku soo caanbaxay tirinta gabayga, iyo helida ereyo aad u dhumuc weyn. Wakhtiyadii uu kureyga ahaa ayuu Raage Ugaas bilaabey inuu tiriyo tixo gabay ah. Inta la hayo maanta gabayadii ugu horeeyay ee Raage Ugaas waxaa ka mid ah ereyadan:
Portal:Dhul/Qof xul ah/4
Maryam bintu Cimraan ( ; ; loo qoro: Marīam, loogu dhawaaqo: "Mariyam"; hooyo u ah: ﻧﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ; "Nebi Ciise"; ama: يسوع, loogu dhawaaqo "yasuuca") waxay ahayd qof muuminad ah oo dhashay isla markaana hooyo u ahayd nebigii Alle u soo direy reer [banii Israaiil waa Nebi Ciise (c.s). Markey taariikhdu ahayd qiyaastii 20 sano C.H (Dhalashaddii Ciise Horteed) ayaa Maryama ku dhalatey magaalada Baytulaxam ee ku taala dhulka ay Falastiiniyiintu degaan, waxay isla magaaladani ku dhimatey markey taariikhdu ahayd qiyaastii 100 ilaa 120 sano C.D. Dhinaca kale, suurada 19aad ee kitaabka Quraanka waxaa loogu magac-daray Maryama; taasi oo ka waramysa nolosheedii iyo camalkeedii. Intaasi waxaa dheer, Maryama bintu Cimraan waxay ka mid tahay sideeda qof ee loogu magac-daray suurad ka mid ah Boqol toban iyo afar Suuradood ee kitaabka Quraanka kariimka ah. Maryama bintu Cimraan waxay ahayd qof wanaagsan oo diinta Alle si fiican u heeysatay isla markaana cabsida Ilaahay dartiis u gashay masaajidka oo hooy u ahaa inta u badan nolosheeda.
Wanaageeda iyo shakhsiyad fiicni darteed, Maryama bintu Cimraan waxay lahayd magacyo iyo naanaysyo badan, kuwaasi waxaa ka mid ah: Hooyadii Ciise, Mucjiso Alle, Tusaalaha Dumarka, Geesiyadii Xaqa, Boqoradii Wanaaga, Saai'ma, Mustafiya, Raaqiyah (Rāki’ah), Saajidah (Sājidah),Qaanitah (Qānitah), Run-sheeg (Siddiqah), Taxiirah (Tāhirah) iyo kuwo kaleba. Dhinaca kale, Maryama bintu Cimraan waxay ahayd hooyo leh mucjiso aad u wayn, sababtoo ah ayadoon u tagin ama la kulmin wax nin ah ayaa waxay uureysatey ka dib na dhashay Sayid Ciise Masiixi, arintaasi oo Alle (s.w) ka dhigay tusaale iyo waxkuqaadasho cajiib badan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Dhul/Qof_xul_ah&oldid=169842"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Luuliyo 2017, marka ee eheed 07:42.